पत्रकारिताको महत्त्व र चुनौतीहरू « Anumodan National Daily
पत्रकारिताको महत्त्व र चुनौतीहरू
प्रकाशित मिति : १६ जेष्ठ २०७४, मंगलवार १९:१२
महान वैज्ञानिक थोमस एल्भा एडिसनले भनेका छन्– ‘फैलिएर रहेका र निचोर्दा रस आउने पत्रकारिता बाहेक अरु कुनै पेशा छैन । यो कति सुन्दर छ भने दैनिक हजारौ कहाँ पुग्दछ, तिनीहरूलाई ज्ञान, सूचना, शिक्षा, र मनोरन्जन प्रदान गर्दछ । मलाई आफू पत्रकार नभएकोमा खेद छ ।’ एडिसनले भने झैं पत्रकारिता त्यो हो, जसले समाजमा दैनिक रुपमा भइरहने क्रियाकलापलाई सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन/प्रसारण गर्दछ ।
पत्रकारिताको उद्देश्य आदर्श समाजको निर्माण हो । पत्रकारितामा नयाँ सामाजिक घटनालाई महत्त्व दिइन्छ । हरेक घटनाको विश्लेषण र मुल्याकंन गर्दै सर्वसाधारणमक्ष उनिहरूले बुझ्ने भाषामा प्रस्तुत गरिन्छ । नविनतम घटनाको संकलन, चयन एवं सम्प्रेषणको समग्र प्रक्रिया पत्रकारिता हो । यो समसायिक ज्ञानको व्यवसाय हो । पत्रकारिता पेशामा संलग्न व्यक्तिलाई पत्रकार भनिन्छ ।
पत्रकारिताका सम्बन्धमा न्यु वल्र्ड इन्साईक्लोपेडियाले लेख्छ– ‘जनचासोका समाचार, विचार जनसमुदायलाई जानकारी गराउने पेशा नै पत्रकारिता हो ।’ पत्रकारिता समाजको ऐना हो । जसरी ऐनाले कुनै पनि बस्तु वा चिजलाई जस्ताको त्यस्तै देखाउाछ, त्यस्तै पत्रकारिताले समाजमा दैनिक रुपमा हुने घटनाहरूलाई जस्ताको त्यस्तै देखाई आमसञ्चारका माध्यमहरू रेडियो, पत्रपत्रिका, अनलाईन पत्रिका र टेलिभिजन मार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दछ ।
बिक्रम सम्वत १९०८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बेलायत भ्रमणबाट फर्किदा एउटा प्रेस भित्र्याएसंगै नेपालमा प्रेस क्षेत्रका गतिविधि सुरु भएका थिए । पत्रपत्रिकाको ईतिहास हेर्ने हो भने १९४३ सालमा मोतीराम भट्टले नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिकाका रुपमा ‘गोर्खा भारत जीवन’ भारतको बनारसमा प्रकाशित गरे । १९५५ सालमा नेपालमै ‘सुधासागर’ नामक पत्रिका प्रकाशनमा आयो । १९५८ सालमा नेपालको जेठो पत्रिकाको रुपमा गोर्खापत्र प्रकाशनमा आयो । यस पत्रिकाको पहिलो प्रति २४ वैशाख १९५८ मा प्रकाशित भएको थियो । १९५८ साल वैशाख २४ गते सोमबारदेखि प्रकाशन थालिएको गोरखापत्र पहिले साप्ताहिक रूपमा प्रकाशन हुने गर्थो । यी विभिन्न पत्रपत्रिका प्रकाशन संगै नेपाली पत्रकारिता सुरु भएको थियो ।
प्रख्यात बेलायती नाटककार टोम स्टोपार्डले भनेका छन् “म अझै विश्वस्त छु, कि यदि तपाईको चाहना संसार परिवर्तन गर्ने छ भने सबै भन्दा छिटो हतियार पत्रकारिता हो” यस भनाई बाट थाहा हुन्छ कि पत्रकारिताको महत्व के र कति छ भनेर, बिचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धि जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने उत्तम बिकल्प पत्रकारिता हो ।
स्वतन्त्र पत्रकारिताको अभावमा प्रजातान्त्रिक समाजको कल्पना सम्भव छैन । प्रजातान्त्रिक संस्कृतिकलाई हुर्काउन र संस्थागत बनाउन पनि पत्रकारिता अत्यान्तै आवश्यक बिषय हो । नेपोलियन वोनापार्ट भन्छन् “पत्रकार भनेका आरोपी, समालोचक, सल्लाहकार बादशाहका प्रतिनिधी र राष्टका सेवक हुन् । चार वटा बिरोधी पत्रिका चारहजार सेना भन्दा पनि डर लाग्दा हुन्छन् ।” पत्रकारिता सभ्यसमाजको शिक्षक, समालोचक, र पहरेदार हो, जसले समाज परिवर्तन र सुधारमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्छ । पत्रकारिता आवजविहिनको आवाज हो जसले समाज भएका विकृती र विसंगतीहरूलाइको पर्दाफास गर्दै यसले पहुाच नभएका सर्वसाधारण नागरिकको पक्षमा वकालत गर्दछ । पत्रकारिताले शासक र शासित वर्गविचको भेदलाई कम गर्दै आपसी सम्वाद, सहमती, र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्दछ । यसले समाजमा लुकेर गरिने भ्रष्टचारलाई पर्दाफास गर्दै निरुत्साहित गदै सभ्य समाज निर्माणमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह खेल्न भुमिका खेल्छ ।
ओझेलमा परेका पिछडीएका, हेपिएका विकासको मुलधारमा नसमेटीएका सर्वसाधारण नागरिकलाई सशक्तिकरण गर्ने माध्यम नै पत्रकारिता हो । त्यसैले अंग्रेजी लेखक तथा पत्रकार ओस्कर वाईल्डले भनेका छन् “अमेरिकामा राष्ट्रिपतिले पााच बर्षसम्म शासन गर्छन, तर पत्रकारिताले त सधै सधै शासन गरिरहेको हुन्छ ।” पत्रकारिताको महत्व बुझाउन ओस्कर वाईल्डको भनाई पर्याप्त छ ।
नेपाली पत्रकारितामा चुनौतीहरू
राज्यको ‘वाचडग’ वा राज्यको चौथो अंगको उपाधी पाएको पत्रकारिता आज विभिन्न चुनौतीसंग खेलिरहेको अवस्था छ । राष्ट्रिय भन्दा पनि मोफसलका मिडियाहरूमा बढी चुनौतीहरू छन् । नेपालका विभिन्न भौगोलिक विकटता भएका क्षेत्रमा त झनै चुनौतीपुर्ण बिषय छ । पत्रकारिता अवसरले भरिएको चुनौतीपूर्ण पेसाका रुपमा पनि लिइने गरिन्छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा राज्यको लगानी सून्यप्राय छ । यसकारण पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा झनै चुनौति बढेको देखिन्छ ।
नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले एक सय वर्ष पार गरिसक्दा पनि यस क्षेत्रका चुनौतीहरू भने कम हुनसकेका छैनन् । किन ? किनकि, मिडिया क्षेत्रमा लगानीको अभाव छ । व्यावसायिक पत्रकारिताको अभ्यास कम छ । यसले गर्दा मिडिया क्षेत्रमा काम गर्ने मिडियाकर्मिहरू टिक्न सकिरहेका छैनन् । मिडियामा काम गर्ने मिडियाकर्मिहरू नै नटिकेपछि मिडिया हाउसहरूको अवस्था के र पत्रकारिताको अवस्था के ? भन्ने प्रश्न उब्जिन्छन् । आर्थिक अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव, अव्यवस्थित मिडिया हाउसहरू पत्रकारिता क्षेत्रका समस्या हुन् । जवसम्म मिडिया हाउस आर्थिक रुपमा सवल हुन सक्दैनन् तवसम्म पत्रकारिता दिगो र सवल बन्न सक्दैन ।
पत्रकारिता क्षेत्रमा नेपालको भौगोलिक बिकटताले पनि चुनौती दिएको अवस्था छ । नेपालका विभिन्न जिल्लामा यातायातको पहुँच नहुनुका साथै संचार क्षेत्रको पहुँच पनि सुस्त छ । यसले गर्दा नेपाली पत्रकारिता जति विकास हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन ।
पेशागत असुरक्षा पत्रकारिता क्षेत्रको अर्को चुनौती हो । एक दशकभन्दा लामो द्वन्द्वका कारण नेपाली पत्रकारहरूले निर्धक्क भएर काम गर्ने मौका पाएनन् । पत्रकारमाथि राज्य र द्वन्द्वरत पक्षबाट सांघातिक हमला, अभद्र व्यवहार, यातना, कुटपिट, अपहरण वा कब्जा एवं हत्या समेतका धम्कि आईरहे । सुरक्षाको उचित प्रबन्धको अभावमा पत्रकारहरू कतिपय घटनाहरूको तथ्यपरक समाचारहरू सार्वजनिक गर्नसकिरहेका छैनन्, जसकारण सम्पुर्ण जनताले देशमा के भईरहेको छ भन्ने कुराहरू थाहा नपाएको अवस्था छ । श्रमजिवी पत्रकार ऐन, २०६४ लागू भएको छ, तर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको । यसले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा निकै चुनौती थपेको छ ।
सञ्चार माध्यमबाट समाजमा भए गरेका हरेक क्रियाकलाप जनता समक्ष पुर्‍याउने पेसा पत्रकारिता हो । राज्यको चौथो अंगका रुपमा स्थापित पत्रकारिता लुकेर बसेका घटनाको खोजीगर्ने, समाजमा रहेका विकृती, विसंगती, भ्रष्टाचारको अन्त्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सञ्चार क्षेत्रको विकास आवश्यक हुन्छ । आम जनतालाई कुनाकाप्चाका गतिविधिको जानकारी दिन प्रभावकारी सञ्चार क्षेत्र आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सञ्चार क्षेत्रमा राज्यले लगानी आवश्यक छ । अर्को कुरा, पत्रकारिता क्षेत्रमा पत्रकारहरूको हकहितका लागि बनेका आचारसंहिताको पूर्ण पालना र पत्रकार श्रमजिवी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन जरुरी छ । र, व्यावसायिक पत्रकारिताको विकासले नै पत्रकारितालाई बढी जनमुखी र उपलब्धीमूलक बनाउँछ ।
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेलको आरोप– शासक बन्न विदेशी शक्तिको आशिर्वाद थाप्ने मानसिकता
धनगढी / राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले विदेशी शक्ति, तत्वहरुको आशिर्वाद पाएपछि मात्रै यो
पहिलो समाजवादी क्रान्तिबाट स्थापित सोभियत संघ ढल्दै गरेको बेला काठमाण्डौमा नेकपा (एमाले) को पाँचौं राष्ट्रिय